ဇီဝဓာတုမီးဖို၊ ဖုန်စုပ်အခြောက်ခံမီးဖို၊ Muffle Oven - Drick
စက်ကိရိယာများ မိတ်ဖက်ပြုနိုင်သော နည်းလမ်းများ
လမ်း၏ ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် သင်နှင့်အတူ။
ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် configure မှညာဘက်
DRK-6000 စီးရီး ဖုန်စုပ်အခြောက်ခံမီးဖို
1.Fahrenheit/Celsius အခမဲ့ c...
DRK-GHP လျှပ်စစ်အပူအပူရှိန် စဉ်ဆက်မပြတ် အပူချိန် Inc...
DRK-810 8-Channel ပိုးသတ်ဆေး အကြွင်းအကျန် Rapid Tester
DRK-810 ချန်နယ် ပိုးသတ်ဆေး R...
DRK-FX-D306 Sox Type Fat Extraction Instrument...
1. တူရိယာ ပေါင်းစပ်...
စက်ရုံမှစျေးပေါသောပူမြင့်သောအပူချိန် Muffle Furna ...
OEM/ODM ပေးသွင်းသူ ရေခဲသေတ္တာ မီးဖိုချောင် - DRK-GHP El...
DRK255 အဆက်မပြတ် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ အခန်း...
စွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်းများ 1. S...
DRK250 အဆက်မပြတ် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ Chambe...
DRK-GC-1690 ဓာတ်ငွေ့ Chromatograph
DRK-GDW အမြင့်နှင့် အပူချိန် စမ်းသပ်ခန်း
ထိပ်တန်းပေးသွင်းသူများ Incubator အမြင့်ဆုံးအပူချိန် -...
1.Standard ကြီးမားသော မျက်နှာပြင် LCD...
Incubator Shop အတွက် အချိန်တို - DRK-LHS-S...
စက်ရုံမှ ပံ့ပိုးပေးသော Cell Culture Incubator - DRK-HQ...
1. တံခါးနှစ်ထပ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူ ...
ဟိန္ဒီဘာသာဖြင့် တရုတ်ထုတ်ကုန်အသစ် Incubator - DRK-HQH...
Shandong Drick Analysis Instruments co.,Ltd.ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်စက်မှုလက်မှုစမ်းသပ်တူရိယာများအတွက် သုတေသန၊ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အဓိကဖြစ်သည်။
2021 ခုနှစ်တွင် “Jinan Gazelle Enterprise” ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သော [Deric Instruments] အား ဂုဏ်ပြုပါသည်။
2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် Jinan Bureau of Industry and Information Technology ၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်သည် 2021 "Jinan Gazelle Enterprise" စာရင်းကို တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။Shandong Drick Instrument Co., Ltd. ကို အောင်မြင်စွာရွေးချယ်ပြီး 2021 "Jinan Gazelle Enterprise" certifica ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်...
သင်နှင့်အတူရုန်းကန်, ကောင်းသောသတိရပါ |အောက်တိုဘာလတွင် ဝန်ထမ်းများအတွက် Derek ၏ မွေးနေ့ပါတီ။
တဦးတည်းရဲ့မွေးနေ့, သင်ကိုယ်တိုင်ပျော်မွေ့;နှစ်ဦး၏မွေးနေ့, နွေးထွေးချိုမြိန်;အဖွဲ့၏ မွေးနေ့၊ ထူးကဲသော အဓိပ္ပါယ်။2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 27 ရက်နေ့ နေ့လည်တွင် DRICK HR ဌာနသည် ဝန်ထမ်းများအတွက် စုပေါင်းမွေးနေ့ပါတီကို ဂရုတစိုက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
Carton compression machine တွင် အဖြစ်များသော ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများ- စမ်းသပ်ခြင်း စက်ချို့ယွင်းချက်များ၊ မကြာခဏ ကွန်ပျူတာ display panel တွင် ပြသထားသော်လည်း software နှင့် computer ချို့ယွင်းချက်များကို သေချာပေါက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အသေးစိတ်ကို ဂရုတစိုက် လုပ်ဆောင်သင့်သည်၊ နောက်ဆုံး ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ .
2021 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 28 ရက်နေ့ နေ့လည်တွင် Shandong Drick Instrument Co., Ltd. သည် " derrick Management System 1.0 အဆင့်မြှင့်တင်မှု 2.0" ၏ မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကို ဥက္ကဌ Wang Yabin မှ ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် ဝန်ထမ်းအချို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
မြင့်မားသောအပူချိန် အခြောက်ခံမီးဖိုသည် ဘဝနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အသုံးအများဆုံး စမ်းသပ်ကိရိယာဖြစ်သည်။၎င်းတွင် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသော်လည်း အလွန်လက်တွေ့ကျပြီး ဘေးကင်းပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောလုပ်ဆောင်ချက်သည် ထုတ်ကုန်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အော်ပရေတာဘေးကင်းရေးတို့အတွက် ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။အပူချိန်မြင့်မားသော အခြောက်ခံမီးဖိုများသည် ပင်မရေစီးကြောင်းဖြစ်လာမည်...